cadnaan kapul – Page 3 – Radio Simba 95.0 MHZ – Simbanews – Idaacada Simba
DEG DEG:-Xildhibaan Lagu Dilay Muqdisho
Kooxo hubeysan ayaa goordhaweyd waxa ay Magaaladda Muqdidho ku dileen Xildhibaan ka Tirsnaa Baarlmaanka Soomaaliya. Allaha u naxariistee Xildhibaanka la dilay ayaa waxaa lagu magacaabi jiray Cismaan Cilmi Boqore oo mar soo noqday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka. Dilka ayaa ka dhacay Xaafad kamid ah Degmadda Kaaraan ee Gobalka Banaadir. Hadaba Shaqsi ceynkee ah ayuu ahaa Marxuum Boqore Wuxuu ...
Farmaajo oo ka Qayb-gelaya Shirka Dalalka Carabta iyo Midowga Yurub
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray dalka Masar si ay uga qayb-galaan Shir Madaxeedka dalalka Carabta iyo Midowga Yurub oo berri ka furmaya magaalada Sharma El-Sheikh. Shir Madaxeedka dalalka Carabta iyo Midowga Yurub oo markii kowaad dalka Masar lagu qabanayo ayaa waxaa looga hadlayaa xoojinta iskaashiga u dhexeeya dalalka Carabta iyo Yurub, ...
Xaaf:-“DFS Waxay Doonaysaa in Wiilasheena Noo Adeegsato”,
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Galmudug Axmed Ducaalle Gelle Xaaf oo maalmahan dambe safar shaqo ku joogay dalka Keynya ayaa maanta gaaray Magaalada Gaalkacyo. Madaxweynaha oo safarkiisa ka warbixiyay ayaa waxa u sheegay in uu Keynya kula soo kulmay Hay’addaha deeq-bixiyaasha ah ayna u balan qaadan in hada kadib Galmudug xaquuqda ay leedahay heli doonto ayna kala shaqeyn doonaan hormarka iyo dhismaha ...
Khasaare Ka Dhashay Rasaas uu Furay Askari, Muqdisho
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay rasaas uu furay goordhaweyd askari ka Tirsan Ciidamadda booliska Dowladda Federaalka Soomaaliya. Falkaan ayaa ka dhacay isgoyska Taleex Degmadda Hodan ee Gobolka Banaadir gaar ahaan Maqaayad shaax lagu cabayay. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal askari ayaa doonayay in uu joojiyo gaari kuwa Raaxadda ah oo doonayay in si xoog ah wadada ...
Ciidamada Dowladda oo Shabaab Kala Wareegay Deegaano Dhowr ah+Sawirro
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa Al-Shabaab kala wareegay degaanno hoos yimaada Gobolka Shabellaha Hoose. Degaanada Al-Shabaab laga xoreeyay ayaa kala ah Kaxarlow, Cali dheere, Xaawo Adduunyo, God doofaar iyo degaanno kale oo hoostaga Degmooyinka Wanla weyn iyo Afgooye. Howlgalka lagu xoreeyay degaanadaani ayaa waxaa hogaaminayay Taliyaha ururka 35-aad guutada 7-aad ee qeybta 60-aad Gaashaanle Maxamed Cabdullahi Caraaye. Degaannada lagala wareegay ...
Wadooyinka Magaaladda Muqdisho oo Saakay Xiran+Sababta
Ciidamadda Amaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa saakay xiray qaar kamid ah wadooyinka Magaaladda Muqdisho ee Caasimadda Soomaaliya. Isgoysyadda Taleex, Soobe,Banaadir, Howlwadaag iyo isgoysyo kale oo ku yaala Magaaladda ayaa saakay xiran. Qaar kamid ah dadkii kusoo lugeeyay wadooyinka xiran ayaa idaacadda Simba u sheegay in wadooyinka ciidamo badan la keeenay islamarkaaana dadka lugtooda adeegsanayaan. Inkastoo dowladda Soomaaliya ay shacabkeeda ku ...
Ciidamo Hubeysan oo Ku Dagaalamay Magaaladda Muqdisho
Iska hor imaad khasaare geystay ayaa manta labo maleeshiyo ku dhexmaray Degmada Hodan ee Gobalka Banaadir gaar ahaan Xaafada Soonakey. Maleeshiyaadkaan ayaa ku murmay dhul ku yaala Degmada Hodan ee Magaalada Muqdisho sida ay noo xaqiijiyeen waxgaradka Maleeshiyaadka Dagaalamay. Inta la Xaqiijiyey Hal ruux ayaa ku dhintay 3-ruux oo kale oo dumar u badana waa ay ku dhaawacmeen iska hor ...
War DEG DEG:-Askari Laba Qof Ku Toogtay Muqdisho
Faahfaahino dheeraad ah ayaa kasoo baxaya Askari ka Tirsan Ciidamadda Dowladda Federaalka Soomaaliya oo goordhaweyd labo qof oo shacab ahaa ku toogtay Magaaladda Muqdisho. Falkaan ayaa ka dhacay Afafka hore ee Isbitaalka Banaadir Degmadda Hodan ee Gobolka Banaadir. Sida ay inoo xaqiijiyeen goobjoogayaal askariga falka geystay ayaa ilaalo ka ahaa isbitaalka Banaadir,wuxuuna rasaasta ku furayay jam ama Ciriiri ka Jiray ...
Al-shabaab oo Muqdisho Ku Dilay Maxamed Mursal
Xarakadda Al-Shabaab ayaa sheegatay Mas’uuliyadda dilka ku-xigeenkii xeer ilaaliyaha Qaranka Dowladda Soomaaliya oo maanta lagu dilay Muqdisho. Qoraal kasoo baxay shabaab oo lagu baahiyay warbaahintooda ayaa lagu sheeegay in ragg ka tirsanaa ciidankooda ay beegsadeen Maxamed Mursal xili uu ku sugnaa Xaafadda Siigaale ee Degmadda Hodan. “Mujaahidiinta ayaa howlgal ay ka fuliyeen degmada Hodon ee magaalada Muqdisho ku dilay sarkaal ...
XFS oo Xeer Kasoo Saartay Heshiisyadda Lala galayo Dowladaha Shisheeye
Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya xassan Ali Khaire ayaa xeer kasoo saaray dhaqan-gelinta hab-raaca heshiisyada dowladda Federaalka ay la gelayso dawlada, hay’adaha shisheeye iyo hay’adaha maxalliga ah.